China ornamental Parts factory na-emepụta | Ọla & Injinia
Akụ ịchọ mma
Anyị (M&E) bụ ọkachamara emeputa maka rụrụ iron & ígwè ornamental akụkụ. na tupu management na putara ighe ahịa na-abara nkà ihe ọmụma nweta ezigbo adigide mmepe na okwu nke elu àgwà ngwaahịa na aha ọma.
M&E ornamental iron components nwere ụdị dị iche iche karịa narị narị nchara nke isi awọ HT-20, Amreican ọkọlọtọ klaasị 20 nke enwere ike ịgbanye site na electrodes, ihe ndị e ji achọ mma nwere ụdị usoro dịka ifuru, epupụta, okpu, olu, akwụkwọ mpịakọta na ogwe… ..nwere ọtụtụ narị nha na ihe nke carbon carbon steel klas 25-35 nke nwere ike ịgbanye site na electrodes nchara.
A na-ebupụ M&E ornamental iron na iron steel na European.north American na mba etiti ọwụwa anyanwụ wdg. Ruo ọtụtụ afọ. Ndị ahịa na-eju afọ nke ukwuu.
Anyị na-enye ọrụ kacha mma
Jiri nwayọ gụọ katalọgụ anyị nke ọma ma mee ka anyị mara ụdị nkọwa zuru ezu. Nha na ukwu ị chọrọ. Ọ bụrụhaala na ị nọ n’ahịa anyị, anyị ga na-ewetara gị katalọgụ kachasị ọhụrụ, foto, ozi ọhụrụ anyị mepụtara ma nabata gị ka ị zitere anyị ihe osise ọhụụ ma ọ bụ ihe osise ọ bụla. Anyị na-anabata iwu ọ bụla buru ibu ma ọ bụ obere, nwee ikike mmepụta maka nnukwu iji nye iwu ma ghọta necsssity maka obere iwu. Ozugbo iwu ọ bụla kwadoro, izipu ga-arụ ọrụ n'oge.
Anyị bụ ndị mpako nke anyị M&E ngwaahịa na-ere nke ọma na ụwa ahịa na ezigbo imekọ ihe ọnụ si ahịa anyị n'ụwa nile .Anyị na-emesi gị obi ike na ị ga-enwe afọ ojuju na anyị mara mma na ngwaahịa, magburu onwe ọrụ na kacha mma price.
Na-nnọọ na-enye ọ bụla aro na ọhụrụ aghụghọ
Nke gara aga: Ngwaahịa Plumbing & Drainage
Osote: Nnukwu Nkedo
Emebiri Iron Ornamental Parts